About Us - Fet zokwakha & Technology Co., Ltd.
Ifayibha Cement Wall Board
IBhodi zixinaniswe Cement Ifayibha
IBhodi Cement Coloured Fibre
IBhodi Cement Wood Grain Fibre
Non Asbestos Board Fiber Cement
IBhodi Cement Interior Fibre
IBhodi Cement yangaphandle Fibre
Calcium Board Silicate
Ifayibha Board Floor Cement
Ifayibha Cement Panel yangaphandle
Ifayibha Cement Panel uhlangothi
Fumana Board Cement Ifayibha Cement Wall Board & Iziqulathi Fibre Now!
Nqakraza apha YESICELO QUOTE
umthengi oyinhloko EZINYE IINKCUKACHA TYPE BUSINESS
amantla Emelika Brands: IBHODI FET nomakhi
amazantsi emelika Inani labasebenzi: 200 ~ 300
Western Europe Sales Annual: 15Million-20Million
Eastern Yurophu Unyaka lwakhiwe: 2003
Eastern Asia pc Export: 50% - 60%
Ningbo Fet zokwakha & Technology Co., Ltd. yasekwa ngowe-2003 e Ningbo City, ibekwe kumazantsi Shanghai, 50km ukusuka Ningbo port.
Thina nokuveliswa inkulu ngobuchule kwibhodi ifayibha yesamente, ibhodi silciate calcium e China ngama-4 automic imveliso lines.Our mveliso kuthatha indawo ye 600,000 yezikwere kunye umthamo yonyaka ka 20,000.000 square metres.
Sinento eninzi lobuchwepheshe kwaye zibonwa iimveliso yenzululwazi kunye zobugcisa kwiphondo novelty.The avavanywa yi Intertek, SGS, TUV, PSV, lweshishini wethu wamkelwa ISO 9001: 2008 kunye ISO14001: 2001, uya kunibonelela abathengi e USA , kuMbindi Mpuma, eOstreliya, eAfrika, eYurophu, South Asia njalo njalo.
Inani thina ukurhweba sithatha-60% yonke kwimveliso.
Ozithobileyo ukufumana abahlobo ukuba basebenzisane kunye nathi!
Ningbo Fet zokwakha & Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2003 Ngenxa ingcamango "esa umgangatho, ezintsha ukuqhuba", inkampani yethu wangcwaliswa nomnikelo iimveliso zehlabathi series abathengi nenkcubeko leyo ukwanelisa iimfuno. Kwaye udale imeko win-win lwamashishini kunye nabathengi baze bayiphumeza inkqubo nophuhliso oluzinzileyo.
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ugxininiso FET kuphuhliso nezokwenza ukuba imveliso leyo unganikeza umsebenzisi eyonwabileyo Fun umgangatho ophezulu kunye nobuchule ekhethekileyo, FET usoloko ugcina phambili isikhundla endle umsebenzi.
FET kwakhona uhlawula ingqalelo uxanduva lweshishini kwezentlalo esenabo-ekhula; sisoloko sikhumbula ukuba ingqikelelo ukhuselo lokusingqongileyo ngexesha ukusetyenziswa eziphathekayo inkqubo yokuvelisa imveliso.
Siya kusetyenziswa ukuvelisa ngokungqinelana ne ISO9001 kunye ISO14001, nokufezekisa TQC ukuze ukutolika ingqiqo brand ekhethekileyo ukusebenza iinkqubo ezipheleleyo ezikhethekileyo, kakuhle, nokusingqongileyo kunye kakhulu-standardised.
Emva kokuba ixesha elide njalo nzima, FET iye yaseka uthungelwano lokumaketha nkqi kulo lonke ihlabathi, iimveliso kuba bayigqibe ngamnye izixeko kwisiphaluka needolophu. Kwimarike yamazwe ngamazwe, abaxhasi zenkampani igcwele kuMzantsi-mpuma Asia, eYurophu, eMelika kunye noMbindi Mpuma kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Siya ngqo yembutho ebomini, ukukhuthaza inkqubo ulwazi reengineering ngakumbi, ukuseka inkqubo ulwazi-based apho nokuthatha zabaxhamli iziko, nokwakha uthungelwano lwehlabathi lokucwangcisela, ukungena nokuphuma kwemali, zidlule ulwazi. Thina ophethe umoya kwishishini "Ukudala ixabiso, kwaye ukuba iziphumo zokuphumelela ngemvisiswano", kukwadala yakhe brand lehlabathi hlanga yaseTshayina yaye ukulungele ukuba ukukhula ngokukhawuleza njengomnye kubathengisi ezamkeleke ehlabathini liphela.
Ningbo Fet zokwakha & Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-2003 Ngenxa ingcamango "umgangatho ikhokela, ezintsha ukuqhuba", inkampani yethu wangcwaliswa nomnikelo abathengi zehlabathi iimveliso series nezenkcubeko, ukwanelisa iimfuno, kwaye bazilungise ubuntu brand ezikhethekileyo, wadala ishishini imeko win-win kunye nabathengi baze bayiphumeza inkqubo nophuhliso oluzinzileyo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ugxininiso FET kuphuhliso nezokwenza ukuba imveliso leyo unganikeza umsebenzisi eyonwabileyo kumnandi. Ukusuka imveliso enye kumgca imveliso ezininzi development.With umgangatho ophezulu kunye nobuchule ekhethekileyo, Sihlala ugcina indawo ephambili endle umsebenzi.
Thina a lokuqala-class iqela umyili olukhethekileyo kunye nombono ngamazwe, yaye kuye kwasekwa enomahluko ubuntu kunye noyilo isimbo yaye yaqinisekisa Ukunyuka okuqhubekayo kuyilo kwimveliso, uphuhliso sokubumbela, imveliso imveliso kwinkqubo ixabiso lentengiso.
Thina imigca imveliso 4 kwinqanaba esizisebenzelayo ophezulu kunye namalungu amaninzi abasebenzi abanezakhono. Thina ikakhulu zibanga mveliso uluhlu iimveliso ezifana engangenwa, zokuhombisa, UV wawutyabeka, ibhodi isamente ifayibha ukukhanya diatomite bath mat.We ziye wazenzela igama elihle kwi iimarike zasekhaya kunye nakwamanye amazwe.
Thina Ufunda Frankfurt Paperworld Fair kunye nomfanekiso brand elungileyo, kwaye iyawuvuyela abathengi ezivela kulo lonke ihlabathi kunye iimveliso ezikumgangatho ophezulu.
Thina khona mboniso Canton, IBHODI FET kubulisa abathengi zehlabathi kunye iimveliso zokubhala ekumgangatho ophezulu, kwaye zibonisa ukuthenga zehlabathi umfanekiso brand elungileyo.
IDILESI: 189 # Longzhen Road, Cixi City, Ningbo, Zhejiang kwiPhondo, China
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Products Hot - eKhaya - AMP Mobile
iBhodi Cement Ifayibha Ngokuba yangaphandle I Wall , Board Cement yangaphandle I Wall Wood Grain Fiber , yangaphandle I Wall iBhodi Cement Fiber isiSwati , iBhodi Cement yangaphandle I Wall Fiber ,